World Tourism Network kwalitere Saudi Tourism Group na Royal Way
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » World Tourism Network kwalitere Saudi Tourism Group na Royal Way
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • Akụkọ Ọchịchị • Ajụjụ Ọnụ • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Network Tourism Network bụ maka iwughari njem. Saudi Arabia pụtara dị ka onye ndu ụwa na -enweghị mgbagha na -etinye ego ya n'azụ nkwa na omume. WTN Saudi Chapter bidoro Saudi Tourism Group ka ọ mata ohere azụmaahịa na ngalaba a maka ndị otu WTN na mba 127.
The Saudi Arabia Isi nke World Tourism Network bidoro ya Otu ndi njem nleta nke Saudi ya na onye isi ala ya bụ Dr. Abdulaziz Bin Naser, onye isi oche nke Saudi Arabia Network Tourism Network, ya na Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO; Louis D'Amore, Onye guzobere, International Institute for Peace Site Tourism; na ọtụtụ ndị ọzọ.
Onye isi ala Najib Balala, onye odeakwụkwọ njem nlegharị anya maka Kenya, gosipụtara ọhụụ ya na ụzọ zuru ụwa ọnụ maka njem nlegharị anya Saudi.
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz haziri ya, onye isi oche Saudi Arabia Raed Habiss, yana onye ọbịa Blanca, "Iwu nke Ndụ"-ihe omume were awa abụọ-kpọkọtara ndị isi njem njem si gburugburu ụwa ọnụ ka ha mụta maka ndị ọrụ Saudi n'ụlọ na gburugburu. ụwa.
“Ọ bụ n'ezie ihe ọ pleasureụ na nsọpụrụ isonye na mmemme a. Daalụ nke ukwuu, Raed Habiss, Jurgen Steinmetz, ndị otu a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu, na Onye Ọchịchị Ọchịchị Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud. Ọ bụ mmụọ nsọ 2030 Saudi Arabia na -ahụ maka njem maka ọdịnihu ga -akpali m, "Blanca nke Iwu nke Ndụ kwuru, onye na -ahazi kọmitii ahụ.
Saudi Arabia nwere nnukwu atụmatụ na akụkọ ugbua maka nnukwu mmezu ọ bụghị naanị itinye Alaeze ahụ n'etiti etiti njem nlegharị anya ụwa, kama imepụta ezigbo ebe nnọkọ maka ndị na -eduga njem nlegharị anya ụwa. Nke ya Onye Ọchịchị Royal Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud rụtụrụ aka na Saudi Arabia na -akwado ndị isi njem na njem nlegharị anya na atụmatụ, gụnyere World Tourism Organisation (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC), na Resilience Tourism Resilience na Crisis Management Center. (GTRCMC).
Alaeze ahụ bara ọgaranya na saịtị nketa dị mkpa na maapụ nke mmepeanya mmadụ, a na -agbakwa mbọ ime ka ha mata ụwa na ịdebanye aha ha n'akwụkwọ ndekọ mba na mba niile, ebe ha bụ akụ na ụba ọdịbendị na omimi omimi nke alaeze.
Usoro ịdebanye aha "Hama Cultural District" na Najran sitere na nnukwu mbọ ndị nnọchi anya eze mere na UNESCO nke onye nnọchi anya eze na United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization "UNESCO" Princess Haifa bint Abdulaziz Al Muqrin, yana ndị otu sitere na Ministry of Culture, the Heritage Authority, na Kọmitii Na -ahụ Maka Mmụta, Omenala na Sayensị.
Mpaghara nka nka ọdịnala na Hima dị na mpaghara square kilomita 557 ma gụnye ihe osise 550 nke nwere narị narị puku ihe osise na eserese.
Oke osimiri Saudi juputara na oke mmiri mmiri, mkpọmkpọ ụgbọ mmiri, na ọdọ mmiri na -amaghị nwoke, yana mmụba nke ụlọ ahịa amaba n'ime obodo dị ka Jeddah, Yanbu, na Al Lith, ndị mbido na ndị dị elu ugbu a nwere ohere nha anya ịhụ mmiri na Saudi Arabia.
Oké Osimiri Oké Osimiri Uhie dị na Saudi Arabia bụ otu n'ime akụ akụ mmiri na -anaghị emebi emebi n'ụwa, ọ bụghịkwa ihe nzuzo na a na -ahụta mmiri na Saudi Arabia dị ka ihe omimi dị omimi maka ndị na -eme ihe omimi. Ọ dabara nke ọma, na imepe njem nlegharị anya na Saudi Arabia, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ekwesịghị ịchekwa ihe kacha mma maka ikpeazụ.
Gee ndị na -ekwu okwu gụnyere Dr. Peter Tarlow, ọkachamara nchekwa na nchekwa; Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ UNWTO; Raed Habiss, Onye isi oche nke WTN Saudi Isi na Onye isi oche nke Jikọọ 2030; n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Isi nke Saudi nke Network Njem Nleta Ụwa anọwo na -arụsi ọrụ ike ma na nso nso a malitere otu ndị isi WhatsApp.
The Otu ndi njem nleta nke Saudi A na -emepụta ya site na WTN Saudi Arabia Chapter. Ndị otu WTN na -ezukọ na -aga n'ihu. Nnukwu ohere azụmaahịa maka ndị otu nọ gburugburu ụwa na -etolite site na netwọkụ.
Hon Najib Balala, onye minista njem nlegharị anya na Kenya gwara ndị otu a okwu.
Najib Balala, odeakwụkwọ nke njem nleta Kenya